MediaTek wuxuu bilaabaa inuu xog ka bixiyo processor -kiisa oo wata 5G | Androidsis
Waxaan wax badan ka ogaanay qorshayaasha MediaTek si ay u bilaabaan soo -saareyaasha 5G bilo. Soo saarista processor -kiisii ​​ugu horreeyay ee noociisa ah wuxuu bilaaban doonaa rubuca hore ee sanadka soo socda, sidii horeba loo ogaa ilaa hadda. Astaanta ayaa xaqiijineysa faahfaahinta ku saabsan wax yar, kuwaas oo muhiim ah.
Qalabkan ugu horreeya ee leh 5G, ayaa sidoo kale la filayaa in MediaTek waxay dooneysaa inay u booddo 7 nm. Markaa waa tallaabo muhiim u ah shirkadda geeddi -socodka bilaabista. Boodbood tayo leh, oo ay tahay inuu ku bixiyo waxqabad wanaagsan processor -ka su'aasha ku jira.
Waxaa hore u jiray shirkado danaynaya adeegsiga processor -kan 5G oo MediaTek soo bandhigi doonto sannadka soo socda. Sida laga soo xigtay warbaahinta kala duwan, Vivo iyo OPPO waxay noqon doonaan laba ka mid ah sumadaha ugu horreeya marka la isticmaalayo. OPPO ayaa dhowaan shaaca ka qaaday rabitaankeeda ah inay 5G keento dhexda-dhexe, sidaa darteed maahan wax aan caadi ahayn inay adeegsadaan jabkan.
Intaa waxaa dheer, hubaal marka processor -kan si rasmi ah loo soo bandhigo, wax sidaas ah hubaal waxay dhici doontaa bilowga 2020, wax badan ka ogow summadaha ama moodooyinka adeegsan doona. Wuxuu ballanqaaday inuu ka mid noqon doono kuwa mas'uulka ka ah in 5G la keeno badhtamaha kala duwan ee Android. Markaa waa arrin.
Marka la bilaabayo isla suuqa, MediaTek kuma baxdo xog la taaban karo. Inkastoo wax walba tilmaamayaan inaan awoodno sug bartamaha sanadka. Markaa laga yaabee in bisha Juun ay durba bilaabmato ama la qorsheeyay ugu yaraan. Laakiin waxaan sugeynaa xog la taaban karo.
Waqti muhiim u ah MediaTek, taas oo laga yaabo inay awood u yeelato inay kordhiso joogitaankeeda suuqa la processor this la 5G. Hubaal waxaa jira sumado badan oo muujinaya xiisaha ay u qabaan. Markaa waxaan aad ugu fiirsan doonaa horumarkiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » MediaTek waxay horey u kobcisay processor-keedii ugu horreeyay oo leh 5G
Motorola One Hyper, waa magaca mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda ee shirkadda